के ब्राजिलको ‘शाम्बा’ शैली हराउँदै गएको हो ? – Medianp
के ब्राजिलको ‘शाम्बा’ शैली हराउँदै गएको हो ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, असार २८, २०७५१२:३९0
सेमिफाइनलमै उरुग्वे फ्रान्ससँग २–० गोलले पराजित हुनपुग्यो । यसको मतबल, सबै दक्षिण अमेरिकी टोली रसियामा जारी विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुग्न सकेनन् । यो २००६ यता पहिलो पटक हो ।यो कुराले के प्रमाणित गर्छ भने दक्षिण अमेरिकी टोली अब शक्तिशाली रहेनन् । २०१४ को विश्वकप देखि नै देखिएको त्यो कमजोरी यो विश्वकपमा प्रमाणित भयो । २०१४ को विश्वकपको सेमिफाइनलमा जर्मनीसँग ७–१ ले पराजित हुँदै ब्राजिलले आश्चार्यजनक रुपमा आफ्नो ‘स्वर्ण युग’ अन्त्य भएको संकेत गरिदियो, जसले विश्व फुटबलमा सनसनी मच्चिएको थियो ।
सबैभन्दा चिन्ताको विषय त हालैका वर्षमा भएका फिफा यू–१७ र यू–२० विश्वकपको उपाधि इंग्ल्याण्डले जितेको थियो । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ की दक्षिण अमेरिकी टोलीमा नयाँ पुस्तासँग पनि पुरानौ शैली र क्षमता छैन । अहिले यूरोपियन टोलीले ‘पावर फुटबल’लाई पच्छाइरहेका छन् र सफल पनि हुँदै आएका छन् । २१ औं शताव्दीको सुरुवातको सफलतापछि दक्षिण अमेरिकी टोली भने कमजोर हुँदै गएका छन् ।
दक्षिण अमेरिकी फुटबलको यो गिरावट एक देशको मात्रै होइन, सिंगो महादेशका लागि चिन्ताको विषय हो । जसले फुटबलका महान हस्ती जन्माएको छ । अब खेलाडीको क्षमता विकास, फुटबल क्षेत्रमा हुने गरेको भनिएको अनियमितता र आफ्नो देशका लिगको विकास गरे मात्रै दक्षिण अमेरिकी फुटबल माथि उक्सन्छ, होइन भने दक्षिण अमेरिकी फुटबल इतिहासमा मात्रै शक्तिशाली रहने विश्लेषण हुन थालेको छ । कारोवारबाट
ब्राजिलियन मिडफिल्डर आर्थर बार्सिलोनामा